I-Inch Ebukekayo - Ukubuka iintaba kunye nolwandle - I-Airbnb
I-Inch Ebukekayo - Ukubuka iintaba kunye nolwandle
Inch East, County Kerry, Ireland
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMairead & Fergus
UMairead & Fergus yi-Superhost
Yonwabela umoya omtsha wasemaphandleni kunye nokubona ulwandle xa uphinda uhleli e-Inch, Coerry.
Ikwimizuzu nje eyi-2 xa uhamba ngemoto usiya kwiflegi eluhlaza i-Inch Beach, ekwiikhilomitha eziyi-5, kunye nevenkile yokutyela, ibhari kunye nevenkile, indawo yethu likhaya elifanelekileyo ukusuka ekhaya ukuze uphumle uze wonwabele indawo entle. Ukongezelela, zininzi iindawo ezinomtsalane ezikufutshane onokuya kuzo, ezibalaselisa izinto ezonwabisayo zikaKerry. Ikhaya elinento yonke, zonke iibhokisi zilungiselelwe ikhefu losapho.
Into eyenza le ndlu ibe ntle kakhulu, okokuqala yindawo entle; ingqongwe ngamatye endalo namatye, ulwandle oluhle - ibe ulwandle i-Inch lukwimizuzu eyi-2 kuphela xa uhamba ngemoto kwaye uqhayisa ngeendawo ezisemaphandleni neentaba.
Le ndlu inamagumbi okulala ayi-3 intsha e-Inch, inamagumbi aliqela ibe inezinto ezininzi ezinomtsalane ngaphakathi nangaphandle. Ngaphambili kule ndlu kukho indawo ezininzi zokupaka zabucala, nenendawo yokungena nefenitshala yokutyela phandle.
Ipaseji yokungena enomoya otyhefayo iya kwigumbi lokuhlala elijikeleze isitovu seenkuni neendawo zokuphefumla kuzo zonke iindawo. Siyazi ukuba kubaluleke kangakanani ukuziva ukhululekile kwaye uphole emva kosuku olude lokubuka indawo, ngoko yiba neglasi yewayini ngoxa wonwabele i-Netflix kwi-Smart TV yethu eyi-55 "– indawo entle yokulala ngokuhlwa.
Ikhitshi elinento yonke/igumbi lokutyela linendawo eyaneleyo yokuba intsapho yonke yonwabe ngendlela evulekileyo, kunye neminyango evulekileyo yokutyela phandle, kuquka nesanti yabantwana.
Buka indawo epholileyo ekwigumbi lokulala eliphantsi ukuze uquke ibhedi elala abantu ababini negumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle.
Ukukhokela ukusuka ekhitshini ukuya kumgangatho osezantsi kuhlanganiswe negumbi lezinto eziluncedo, kuquka umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokomisa iimpahla, iayini, ibhodi yentsimbi, izixhobo zoncedo lokuqala njl. Indlu yethu inazo zonke izinto oza kuzidinga ukuze uphumle.
Phezulu egumbini lokulala elitofotofo nelipholileyo kwigumbi lokulala elikhulu, kunye negumbi lokuhlambela elipheleleyo ukuze libe nemfihlo, izinto zokuthambisa ezamkelekileyo kunye neendawo ezintle ezikufutshane.
Ukungayilibali abantwana, nabantwana bakulungele ukuba nebhedi elala abantu ababini okanye enye kufutshane negumbi elikhulu, kukho igumbi lokudlala eliza kuncuma ebantwaneni bakho. Abantwana banokuyonwabela isanti yendlu okanye bayigcine isebenza ngemidlalo emininzi yebhodi! Ikhothi yeentsana nesitulo sokutyisela usana nazo ziyafumaneka xa kucelwa.
Kanye nendlu enkulu, iindawo zinezinto ezikhanyayo, ezifanelekileyo zokugcina iimpahla eziselunxwemeni kunye neebhayisekile.
Kubantu abancinci nabantwana abadala kukho nezinto ezininzi ezonwabisayo ezifihlakeleyo nezivuyisayo. Iigusha ezinoboya kunye neetakane ezifuywayo (ngexesha lokugungxula kuphela) ziza kufika kanye ukuze zibulise zize zibe nepat! Ngamanye amaxesha unokukwazi ukuzityisa kwindawo ekhuselekileyo – yindawo entle yokufota!
Ukuba ufumanisa ukuba ufuna ukubuka iindawo ezikufutshane ngexesha lokuhlala kwakho, indlu yethu ikwindawo esembindini efanelekileyo. Ngokuqinisekileyo ufanele uphume uze ubuke iCastlegregory kunye neCastle kwaye zombini iDingle kunye neTralee zikumgama nje wemizuzu eyi-25 xa uhamba ngemoto ukusuka endlwini enezinto ezinokusetyenziswa ezininzi. Kukwakho neevenkile zokutyela ezintle onokukhetha kuzo, kunye neevenkile zekofu ezintle kunye neevenkile zokutyela ezikufutshane.
Nokuba yintoni oyidingayo kuhambo lwakho, nceda uqhakamshelane nathi, kwaye ukuba singakunceda, siza kukunceda. Sithanda nokuqinisekisa ukuba zonke iindwendwe zethu silungiselela ukuhlala kwakho ngokuzikhusela okuphezulu. Imigaqo yokucoca ephuculiweyo, iquka ukwandisa ixesha lethu lokucoca ngosuku lokufika nelokuhamba kwaye onke amashiti ahlanjwa ngobuchule. Sinokunikezela ngenkonzo yokuqhakamshelana nawe simahla xa ufika, okanye ngenye indlela siza kwamkela iqela lakho xa lifika.
Ngoko kutheni ungayithandi i-Inch kunye neendawo zayo zasendle njengoko uphumle kwikhaya lakho elitsha leholide!!
I-Inch kunye nommandla ojikelezileyo unokuninzi kakhulu ukusuka kwi-Fungi eyahlukileyo, uhambo lwezikhephe ze-Dingle Dophin, ukuhlikihla kunye nokubamba izilwanyana kwi-Sandy Feet Pet Farm, wonwabele uhambo lwembali kwihashe kunye nokukhwela inqwelo eMuckross Park, e-Longarney okanye uhambe ngemoto ejikeleze i-Ring of Kerry.
Kwiintlobo ezisebenzayo ungaya kubhukuda okanye udlale ngephenyane elunxwemeni i-Inch kunye neForom Waves Surf School, udlale igalufa kwiDooks Golf Course eGlenbeigh, okanye uhambo olumnandi lwe-pony kunye ne-O Connor 's Trekking.
Ukuze abantu abathanda indalo bonwabele ukubuka iintaba ezintle kunye nokuhambahamba emaphandleni, tyelela iGlanteenassig Forest Park okanye ujikeleze iConor Pass emangalisayo.
Nokuba ngezo ntsuku zinezimvula, abantwana banokuhlala bonwabile ngeemuvi ezintsha eFiniplex Cinema, iPlaydium inezinto ezonwabisayo nezonwabisayo kwezona ndawo zinkulu zokudlala eTralee, okanye utyibilike emanzini kwenye yezona ndawo zinamanzi amakhulu zaseIreland eAquadome.
Siyakuqinisekisa ukuba awuyi kukhathazeka!
Umbuki zindwendwe ngu- Mairead & Fergus
Sikhona ukuze siphendule nayiphi na imibuzo kunye nezicelo zokucebisa ngezinto onokuzibona uze uzenze ngexesha lokuhlala kwakho.
Sinokunikezela ngenkonzo yokuqhakamshelana nawe simahla xa ufika, okanye ngenye indlela siza kwamkela iqela lakho xa lifika.
Sinokunikezela ngenkonzo yokuqhakamshelana naw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Inch East